Ogaden News Agency (ONA) – Mashruucii Biyo Xidheenka Itoobiya oo Fashil Kudhaw.
Mashruucii Biyo Xidheenka Itoobiya oo Fashil Kudhaw.
Posted by Dulmane	/ September 6, 2018
Xog rasmi ah oo ay heshay Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ayaa muujinaysa in uu fashil kudhaw yahay mashruucii biyo xidheenka wabiga Nile, ee kasocday wadanka Itoobiya.
Sida xogta aan kuhelayno mashruucan oo looyaqaano biyo xidheenka Abay ayaa markii hore la qorsheeyay in uu kudhamaado mudo 5 sano ah, hase yeeshee mashruuca ayaa socda 7 sano mana jiro wax hor mar ah oo uusameeyay.
Dadka ka agdhaw mashruuca biyo xidheenka wabiga Nile ayaa sheegaya in 35% uu yahay meeshii laga rabay in uu dhamaado 2 sano kahor ama uu hor mar aad ubadan sameeyo.
Mashruucan oo curintiisii uu lahaa kaligii taliyihii hore ee Itoobiya Malis Zinawi ayaa dhaliyay muran badan oo kusaabsan biyo xidheenka, waxaana qorshahan ay Itoobiya kudhaqaaqday kabiyo diiday dowlada Masar oo iyadu lahayd saamiga ugu badan ee biyaha wabiga Nile.
Intaas kadib mashruuca ayaa dib ugurato sameeyay waxaana ladilay injineerkii mashruuca samaynayay, kaas oo mashruuca dhabar jab wayn kunoqday kuna qasbay in uu istaago intiisa badan.
Xukuumadihii hore ee Itoobiya ayaa Malaayiin lacago ah kaqaaday dadka shacabka ah ee Itoobiya, waxaana lasheegayaa in musuq maasuq badan oo wadanka kajiray uu suurta galinwaayay in lacagahaas lagu qabto howlihii loogu talagalay.
Inta badan fashilka mashruuca ayaa loo tiirinayaa shirkadii biraha qandaraaska kuqaadatay oo METEC lagu magacaabo taas oo ay lahaayeen Janaraalo Tigree ah.